Free Download Call of 4 Duty Patch u Mac | MacArsenal
> Resource > Mac > Aspyr Media Call of Duty 4 Patch u Mac
Aspyr Media Call of 4 Duty Patch u Mac
Call of 4 Duty Patch u Mac waa ciyaar la korreysa ku kacsan oo qalloocinaya dhagarta, taas oo ciyaartoyda siinayaa khibrad immersive dagaalka ah. Ciyaarta ayaa ku soo diri doonaa ciyaartoy mid ka mid ah waayo-aragnimada beeniyay ugu cad la saamaynta gaar ah aan caadi ahayn, oo ay ku jiraan qar-nalalka, si qoto dheer duurka, geeyo texture iyo dabeecad is-hoos galay.
Muuqan nidaam adag Nigeria, xaddi badan oo abaalmarinno unlockable, kulul-ku biiro iyo matchmaking, iyo sidoo kale awoodaha fasalka iyo xisbi, ciyaartoyda damaanado codsiga ee heerarka xirfad kala duwan oo dhan ku raaxaysan karaan ciyaarta.
Ka sokow, in ka badan 100 caqabadaha iyo noocyo kala duwan oo ka mid ah deegaanno cusub oo ciyaarta iyo hababka ku jira fursadaha aan la koobi karayn. Si dagdag ah ku celiska ah, qalabka Ward ayaa sidoo kale ka mid Dila-Cam, taas oo feature taageere jecel in Call of Duty 2.
Hubka sax ah Advanced?
Iyada oo Arsenal ah la heli karo in ka badan 70 hubka cusub oo dhab ah iyo qalabka ka qoryaha la goobaha laser, miinooyinka claymore, qoryaha diirada leh 50 heerkiisa, iyo M-249 qoryaha darandooriga u arkay, samatabbixin ciyaarta ciyaaryahan ee madadaalo ee badan beeniyay.
Isku habaynta iyo weerarkii Support?
Horyaalka waxaa ka mid ah dagaal oo casri ah ka soo askari si ay ku qorantahay, halka taageero hawada waa arrin walaac weyn in ay gaaraan guul. The ciidamo rush adrenaline ciyaartoyda u saamaxaaya in ay dar-dar Xadhig ka <br> <br> anteenada xeelad, fuushiyey Armada ah han waynahay weerarka, isticmaasho diyaaradaha si ay u kala furfuraan qalcadihiisii ​​cadowga iyo xitaa galaan hostiles ee helicopters.
Sameynayo Sawirro filimada Tayada iyo Sound?
Marka bilaabay, ciyaartoyda la baabtiiso doonaa tayada cajiib ah Muuqaal oo ka dhawaajiso ayaa tan iyo markii ay aadamuhu waxa la sawiro cad iyo maanta sheekada ku dagaal dhab ah.
Ku noqo Castle Wolfenstein u Mac
Sidee loo Diiwaan Video saakay On PS4
Sida loo Beddelaan Amr in MP3 on Mac OS X (El Capitan ka mid ah)
Kan sameeyey Movie u Mac: Sida loo sameeyo Movie ah ee Mac
Sidee inuu ka soo kabsado formatted SD Card Mac
Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka Mac si iPhone aan Lugood
Sida loo Copy Voice cadaymaha ka iPhone si Mac